DEG DEG: ”Ruushku kaligii ayuu dagaal doortay!” – NATO oo sheegtay inay ciidamo u dirayso bariga Yurub | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DEG DEG: ”Ruushku kaligii ayuu dagaal doortay!” – NATO oo sheegtay inay...
DEG DEG: ”Ruushku kaligii ayuu dagaal doortay!” – NATO oo sheegtay inay ciidamo u dirayso bariga Yurub
(Brussels) 24 Feb 2022 – NATO ayaa ku dhawaaqday in ay ‘ciidanka difaaca dhulka iyo cirka’ gayn doonto qaybta bari ee dalalka xubnaha ka ah ururka iyo kordhinta diyaargarowga dhammaan heeganka ciidamadeeda ‘si ay uga jawaabaan dhammaan xaaladaha soo kordha,’ iyadoo laga duulayo ‘hawlaha’ millatariga Ruushka ee Ukraine.
“Falalka Ruushku waxay khatar wayn ku yihiin ammaanka Euro-Atlantic, waxayna yeelan doonaan cawaaqib juqraafiyeed. NATO waxay sii wadi doontaa inay qaaddo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo xaqiijiyo ammaanka iyo difaaca dhammaan xulafada,” isbahaysiga ayaa ku yiri bayaan uu soo saaray goor dhow.
Kaddib wada tashiyo degdeg ah, ururku wuxuu go’aansaday “inay qaado tillaabooyin dheeri ah” si loo xoojiyo “kahortagga iyo difaaca gaashaanbuurta.”
“Tallaabooyinkeennu waa kuwo kahortag ah, dhigan ah balse aan xaalad kicin ahayn,” ayay tiri NATO iyadoo uu Isbaheysigani ugu yeeray howlgalka millateri ee Ruushka “weerar argagax leh oo lagu qaaday Ukraine, kaas oo gebi ahaanba ah mid aan cudur daar lahayn oo aan laga fiirsan” waxayna ugu baaqeen Moscow “in ay si degdeg ah u joojiso” falkan.
“Ruushka wuxuu bixin doonaa qiimo dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aad u culus. NATO waxay sii wadi doontaa inay si dhow ula shaqeyso daneeyayaasha ay khuseyso iyo ururrada kale ee caalamiga ah oo ay ku jiraan Midowga Yurub,” ayaa lagu sii daray bayaanka.
NATO waxay ku andacoonaysaa in ay “ay samaysay dedaal kasta oo lagu raadinayo diblomaasiyad iyo wadahadal lala yeesho Ruushka” waxayna “si isdaba joog ah ugu casuuntay” wadahadalka Golaha ka dhexeeya NATO-Ruushka.
“Ruushka weli taa kama soo jawaabin. Waa Ruushka, iyo Ruushka oo keliya, cidda doortay xiisadda, “ayay ku doodday NATO.
Yeelkeede, Ruushka ayaa ogolaa inuusan dagaal qaadin haddii ay reer Galbeedku joojiyaan inay Ukraine kusoo daraan ururka NATO, balse way diideen.
Previous article“Tani waa Sudetenland” – Nancy Pelosi oo tillaabada Putin ku mitaashey arrin uu sameeyey Hitler (Halkee ka dhacday?)
Next articleQoraa Kenyan ah oo munaafaqad Somalia ku saabsan kasoo saaray khudbad ay shalay Kenya ka jeedisey QM oo ka dhan ah Ruushka